A Tesla na-ere ọkụ na French Basque Country n'oge nnwale ule | Akụkọ akụrụngwa
Ugbo ala nke ụlọ ọrụ Elon Musk mere na-aga na teknụzụ, ọdịnihu nke ụgbọ ala eletriki na nke kwụ ọtọ. Otú ọ dị, dị ka ọ bụla gadget, o nwere adịghị ike ya site n'oge ruo n'oge. Gbọ ala nke Tesla Motors mere n'onwe ya n'ọkụ mgbe ọ na-agba ịnyịnya. Noisezụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkụ nke ụgbọ ahụ na-ada ndị njem nọ n'ụjọ. Ọ bụghị ụjọ mbụ nke Tesla na-enye n'oge na-adịbeghị anya, agbanyeghị, ọnụọgụ ihe ọghọm nke ụdị a abụghị ihe na-emenye ụjọ, n'ime nkịtị maka ụgbọ ala na-erebu ọkụ.
Ihe nlere ọ bụ a Model Model S 90D, nke ọkụ gbara na Aritxague boulevard na Anglet, nke dịdebere etiti obodo nke Bayonne, na ndịda France, ebe a maara dị ka French Basque Country. Njem ahụ, na mgbakwunye, bụ nnwale, ya mere, a chụpụrụ onye nwere ike ịzụta ngwa ngwa na ịzụta nke Tesla. Mmadụ atọ nọ n'ụgbọ ahụ n'oge ahụ, onye nnọchianya nke akara Tesla, onye nwere mmasị ịzụta ya na otu onye nke ikpeazụ.
Enwere m mmasị n'ụgbọala, n'ihi ya na Mọnde m chọrọ ịnwale ụgbọ ahụ. Anyị gbara obodo ahụ gburugburu ihe dị ka nkeji 20 ma mgbe anyị na-anya ihe dị ka kilomita 70 / awa anyị nụrụ oke mkpọtụ site n'ụgbọ ala ahụ. N’ime nkeji abụọ ọ na-ere ọkụ, mana ọ bụ na n’ime nkeji ise ire ọkụ a ga-erepịa ya.
Ozugbo mbigbọ ahụ, onye nnọchianya nke ika ahụ gwara onye ọkwọ ụgbọ ala ka ọ kwụsị ụgbọala ahụ ozugbo iji kpọọ ọrụ enyemaka, n'agbanyeghị, ha hụrụ ụfọdụ anwụrụ ọkụ na-apụta site na mpaghara ahụ. Onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ nwere ụjọ, anyị ga-echeta na batrị lithium nwere ọtụtụ volatility ma nwee ike ịdị egwu ma ọ bụ karịa mmanụ ụgbọala n'onwe ya. NkechiDabere na Tesla, ha na-amụ ihe merenụ na-egosi mmekorita ha iji chọpụta ihe kpatara ya, ma nwee ekele na ndị bi na ya nwere ike ịhapụ ụgbọ ala ahụ tupu ọdachi ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » A na-agba Tesla na French Basque Country n'oge ule ule